Ungayiqeda Kanjani Imazi Ngemuva Kwesivunguvungu - I-Ellicott Dredges
Mashi 6, 2018
Ngesinye isikhathi, ngaphezulu kwamalitha ayizigidi ezingama-4 (amalitha ayizigidi ezingama-1,514) ukuhanjiswa kwendle okuphathelene nobuthi kuyehla ungene ePalm Bay Florida eTurkey Creek. Ngenxa yalokhu, iTurkey Creek yayiqukethe amazinga aphezulu kakhulu obuthi obuyingozi nezakhamzimba.
Ngesikhathi sentwasahlobo se-2017, iqembu liqhamuka Ukudilizwa kwe-Gator bachitha isikhathi sabo esiningi begxile ekuhlanzeni ukungcola okwake kwathatha iTurkey Creek, bekhipha ngaphezulu kwe-236,000 yd3 (180,435 m3) of muck, ukungcoliswa kwe-nitrogen, ne-phosphorus.
Uhlobo Olungile Lwezinsimbi
Uma usebenza ngeprojekthi elingana neTurkey Creek, udinga uhlobo olufanele lwemishini. Kule projekthi, i-Ellicott Udrako 670 Udrako® ukwehla kukhethwe. I-670 iyakwazi ukumba ijule ngamamitha ayi-42 (13.0 m) futhi iqukethe ipompo elikhulu elinamandla amaningi wehhashi elidingekayo ukuqedela umsebenzi walobu bukhulu. Uchungechunge 670 Dragon® i-dredge yaziwa njengesiqeshana semishini ethembekile, ethembekile, ne-top-notch enedumela elihle kakhulu.
The initial I-Turkey Creek yokuhlanza kuthathe izinyanga ezimbalwa ukuqeda, kepha ngenkathi umsebenzi usuya ngasemaphethelweni, wonke amaqembu athintekile ukuhlanzwa kokuqala acabanga ukuthi umsebenzi wawo usuzophela. Kodwa-ke, bebengazi ukuthi inhlekelele yemvelo isiseduze ekhoneni elizobeka phansi wonke umsebenzi wabo onzima wangaphambili nomzamo.
NgoSepthemba 11, 2017, iSiphepho u-Irma sashaya iGulf Coast yaseFlorida, sabangela okukhulu izikhukhula emphakathini oseduze waseTurkey Creek oseduze neGainesville. Okwesibili kungakapheli neminyaka emibili, umchilo onobungozi owawukade ukhona eTurkey Creek waphinde wangena emfuleni wamanzi futhi wahlanzwa. Ngalesi sikhathi, iqembu elivela eGator Dredging lacelwa ukuthi lisuse umquba ophilayo manje owawungatholakala ngaphansi kwamachweba asezindaweni ezijulile futhi ugcwalise izimbobo ezijulile kuyo yonke indawo ezungeze iTurkey Creek eyayithonywe ukulimala kwesiphepho.
Izinselelo ezimbili ezibaluleke kakhulu ezibhekene neqembu kusuka eGator Dredge ngesikhathi senqubo yokuhlanza ngalesi sikhathi zifaka ukuphatha izinto nokulawula ukubuya kwamanzi. Lokho kungenxa yokuthi, cishe iminyaka engamashumi ayisihlanu, izikhulu zendawo nezikahulumeni zasishaya indiva isimo somfudlana, umthelela umcuba owawinawo empilweni yezakhamizi, kanye nomthelela wazo endaweni yokuhlala ezungezile.
Ukudonswa phansi kuyisisekelo semiklamo eminingi yasemanzini futhi kukhulunywa ngezidingo ezahlukahlukene zomhlaba zezimali, ezenhlalo nezemvelo. Ngabantu abangaphezu kwamaphesenti angama-50 bomhlaba abahlala ngaphakathi kwebanga elingamakhilomitha ayi-125 (201 km) lolwandle olubalulekile, izindawo eziphansi ezinjengeTurkey Creek zisengozini yezikhukhula ezinzima futhi zidinga ukwenziwa ngcono njalo ngasogwini lwayo.
Izindawo ezinamanzi afana neTurkey Creek ziye zathola amazinga okunyuka kwamanzi okubangelwa izivunguvungu ezinamandla njengeSiphepho Irma. Imiphumela ifaka phakathi ukulinyazwa kwempahla kumakhulu wabanini bamakhaya abahlaselwe yisiphepho esibulalayo, futhi kuthinta nendawo ezungezile ebangela izigidi zamadola ngomonakalo uma ishiywe ingalashwa.
Manje kungani ukuqumba kubalulekile? Lapho kudonswa amanzi amaningi, mancane amathuba okuthi ukuguguleka kolwandle kwenzeke, futhi indawo yokuhlala ezungezile iyabuyiselwa. Izinhlobo eziningi zesidumbu ziqukethe ubuthi obuvela ekubalekeni kwezimboni okunomthelela omkhulu ekhwalithi yamanzi.
Lapho kungasuswa noma yiluphi uhlobo lodoti oluqukethe ukungcola, impilo yomzimba wonke iyathuthuka.